Indlu e-Inverell - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguCarolyn
IQuant Californian bungalow ebekwe kwindawo entle eNew England. Ibekwe kakuhle kwaye inikwe ngokukhululekileyo ngayo yonke into oyifunayo, eli khaya lokulala li-3 kukuhamba okufutshane ukuya embindini wedolophu kwaye liyakonwabela ukujonga iinduli ezingaphaya. Iyafumaneka kwirenti yexesha elifutshane ukuya kweliphakathi. Pet friendly phezu thethwano.
Ibekwe kwigadi enamagqabi efihlakeleyo, indlwana ixhotyiswe ngokukhululekileyo ngookumkanikazi ababini & negumbi elinye lokulala, igumbi lokuhlambela, izindlu zangasese ezimbini, igumbi lokuphumla, igumbi lokutyela & nelanga; umlilo weenkuni, umva umjikelo womoya womoya kunye neebhalkhoni ezimbini ezisecaleni ezijonge edolophini. Onke amagumbi aneefeni zesilingi kwaye iifestile kunye neengcango zivaliwe.
Amagumbi amabini okulala akhelwe ii-in kunye neebhedi ezinkulukazi ezinoomatrasi bamathambo; Igumbi lokulala elikhulu livula ngeengcango eziphindwe kabini zeFrench kwibalcony yabucala apho ungahlala khona kwaye wonwabele ikofu yakho ngelixa ugcakamela ilanga lasekuseni. Igumbi lokulala lesithathu linebhedi enye enomandlalo omtsha.
Ikhitshi ebekwe kakuhle ene-microwave kunye ne-dishwasher; ibhafu kunye neshawari eyahlukileyo; I-intanethi engenazingcingo, iyunithi yomoya yokutshintsha umjikelo womoya kwigumbi lokuhlala kunye nesixhobo sokufudumeza esicothayo somthi ngokunjalo, zibonelelwe ngamaplanga.
Izibuko lemoto ephindwe kabini kunye nokufikelela kwindlela eyahlukileyo yangasemva.
Imizuzu emihlanu uhamba ngomlambo iMacintyre ukuya edolophini. Izinja ezincinci zamkelekile xa uthethathethwano.
4.91 · Izimvo eziyi-88
Le ndlu ikwindawo ekhuseleke kakhulu, enobuhlobo kwimizuzu nje emihlanu uhamba unqumla iMcIntyre kunye nomlambo ukusuka kwindawo yeshishini, iipaki, iindawo zokuzilolonga, ii-pubs kunye neevenkile; Ziibhloko ezimbini zokuhamba umgama ukusuka kwisikolo samabanga aphakamileyo i-Inverell kwisitalato iBrae kwaye ikwakwiibhloko ezimbini ukusuka kwiziko logcino lwabantwana eGeorge Street.
Umtsalane wabakhenkethi balapha:
I-Inverell yimizuzu engamashumi amane ukusuka eGlen Innes ngemoto kunye neyure ukusuka eMoree, eyaziwa ngokuba yi-spas yayo yezimbiwa ezishushu, iivenkile kunye neegalari zobugcisa, kubandakanya iGalari yeNgingqi yeMoree Plains, iMehi Gallery kunye neZiko laseYaama Ganu apho iindwendwe zinokujonga imizekelo emihle yasekhaya neyaseNtshona. UbuGcisa boMdabu weSithili.
IDama laseCopeton, indawo ekulotywa kuyo edumileyo kunye nokuhamba ngesikhephe kukuhamba ngemizuzu engamashumi amabini ukusuka e-Inverell; IGoonoowiggal National Park, ime kumgama oziikhilomitha ezi-5 ukusuka e-Inverell eGilgai ibonelela ngeengoma zokuhamba kunye nokubaleka kwilizwe elirhabaxa le granite; ILake Inverell ezaliswe bubomi obahlukeneyo beentaka, kubandakanywa amadada amnyama kunye neepelicans zibonelela ngeengoma zokuhamba, i-kayaking kunye neendawo ezinamahlamvu ebarbeque kunye needolophu zasekhaya ezinjengeBingara, iBundarra kunye neTingha yindawo enomdla yokundwendwela.
My far flung family, friendships and interests cause me to live a semi nomadic lifestyle, which has led me to list my house on Airbnb and open it to guests. The house offers a quiet, atmospheric retreat which I hope you'll enjoy as much as I do.
My far flung family, friendships and interests cause me to live a semi nomadic lifestyle, which has led me to list my house on Airbnb and open it to guests. The house offers a quie…
Umamkeli unokuqhagamshelwa nge-imeyile kunye nefowuni.
Inombolo yomthetho: PID-STRA-16721